चीन Facade / पर्दा पर्दा ग्लास कारखाना र निर्माताओं | Yongyu
मेड-टु-परफेक्शन गिलास पर्दा पर्खाल र facades
तपाई बाहिर निस्केर चारैतिर हेर्दा तपाई के देख्नुहुन्छ? उच्च वृद्धि भवनहरू! तिनीहरू जताततै तितर बितर छन्, र त्यहाँ उनीहरूको बारेमा उत्साहजनक केहि छ। तिनीहरूको आश्चर्यजनक उपस्थिति पर्दा ग्लास भित्ताहरूले भरिएको छ जुन उनीहरूको समकालीन लुकमा परिष्कृत स्पर्श जोड्दछन्। यो हामी हो, यong्गयु ग्लासमा, हाम्रो उत्पादहरूको प्रत्येक टुक्रा प्रदान गर्न कोसिस गर्दछौं।
हाम्रो गिलास facades र पर्दा पर्खाल आकार र मोटाई विकल्पको भरमा आउँछन्। ती कम गर्न र कम गर्न र तपाइँको जीवन या काम को अनुभव को लागी अधिक आरामदायक तत्वहरु को लागी अवरुद्ध गरेर। यसका साथै, ती उत्कृष्ट थर्मल दक्षता पनि सुनिश्चित गर्दछन्, तपाईंलाई निर्माण अपरेटिंग लागतहरूमा बचत गर्न मद्दत गर्दछन्।
तपाईंको गिलास फेकड्स अर्डर गर्नुहोस् - हामी उनीहरूलाई एक क्षणमा डेलिभर गर्नेछौं।
के यो केहि जम्बो साइज हो जुन तपाई प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ? वा तपाईलाई चाहिएको अनुप्रयोगको बन्ड मिलाउन यो घुमाउरो आवश्यक छ? के ले हामीलाई छनौटको गिलास फेकड निर्माता बनाउँछ कि हामी प्रत्येक प्रोजेक्टको लागि सही फिट प्रदान गर्न सक्छौं। बनावट, आकार, कोटिंग प्रकारहरू, इत्यादिमा अधिक विवरणहरूको लागि यो चयन ब्राउज गर्नुहोस्।
हामीलाई हिट गर्नुहोस् तब तपाईंको प्रोजेक्ट विवरणहरू छलफल गर्न र उद्धरण प्राप्त गर्न। हामी तपाईंलाई आश्वासन दिन्छौं कि तपाईंको गिलास पर्दा प्रणाली केही हप्ताहरूमा हुनेछ!
अघिल्लो: जम्बो / ओभरसाइज्ड सुरक्षा ग्लास
अर्को: सुरक्षा ग्लास रेलिंग र फेंसहरू
पर्दा वाल गिलास
पर्दा पर्खाल गिलास आयाम
पर्दा भित्ता ग्लास मोटाई
पर्दा वाल टेम्पर्ड ग्लास
ग्लास पर्दा वाल एन एस्पानोल